ह्वात्तै घट्यो कुखुराको मूल्य, कुखुरा बिक्ने छाडे ! – Sandesh Press
June 4, 2021 163
Nextसंसारकै मोटो भनेर चिनिने १ सय ९३ किलो भएका बालकले यसरी घटाए १ सय ८ किलो तौल
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (2219)
रमेश खरेल को’रोना सं’क्रमण (1533)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (1282)